Professional ကစိတ်တိုင်းကျမှိုဒီဇိုင်း Injection ကိုမှိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုလုပ်ငန်းစဉ်,ABS ပလတ်စတစ်မှို,injection မှိုဒီဇိုင်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > မှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း > အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများမှိုထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း > Professional ကစိတ်တိုင်းကျမှိုဒီဇိုင်း Injection ကိုမှိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
ချမ်းပြေးသမားနှင့်ပူပြေးသမားပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်ကို process မှပလပ်စတစ်ဆေးထိုးမှို အသုံးပြု. ၏နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ရွေးချယ်မှုအအေးမိပြေးသမားသို့မဟုတ်ပူပြေးသမား, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုအရောအနှောကိုအသုံးပြုရန်ကြောင်းထို့ကြောင့်မှိုမချခင်, ငါတို့သည်ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ၏ပလပ်စတစ်ပစ္စည်း, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးပြဿနာကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ပူပြင်းပြေးသမားယခုအဓိကအားကြီးမားပြီးရှည်လျားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ thermoplastic ဆေးထိုးမှိုတစ်ဂီယာစနစ်, ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆေးထိုးတန်ဆာဒီဇိုင်းကိုဖောက်သည်များကကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ။ အဆိုပါပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသငျသညျအချိန်တိုကာလ၌ သာ. ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြု, ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အတူသင်တို့သည်။
high-တိကျမှိုများနှင့်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာ, ကုမ္ပဏီအဆက်မပြတ် High-တိစက်ပစ္စည်းနှင့်ကိရိယာများကိုမိတ်ဆက်နှင့်အဆက်မပြတ်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာမှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏အနှစ်သာရကိုစုပ်ယူ။ ကျနော်တို့အဆင့်မြင့် CNC (Computer ကိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုစင်တာ) ဂဏန်းထိန်းချုပ်မှုအပါအဝင်ယူနစ်မှိုအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများများစွာ, High-တိကျစွာ EDM (EDM စက်), ထိုကဲ့သို့သောမှိုကဲ့သို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, Multi-function ကိုကြိတ်စက်, အမျိုးမျိုးရှိသည်။ မှိုန်ဆောင်မှုများ၏တစ်နေရာတည်းမှာအပြောင်းအလဲနဲ့အတူဖောက်သည်ပေးနိုင်ပါသည်။
ပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုနှင့်အတူမှို